Gargaarka Kabitaanka ee Minnesota (MSA) | LawHelp Minnesota
Gargaarka Kabitaanka ee Minnesota (MSA)
MSA waa Gargaarka Kabitaanka ee Minnesota. Waa lacag yar oo gobolku bixiyo oo la siiyo dadka dakhligoodu yar yahay ee da’da ah, indhaha la’a ama naafada ah ee la saiiyo Kabitaanka Dakhliga ee Lambarka Bulshada (SSI). Waxaa kale oo suurogal ah in la siiyoMSA dadka la siiyo Gargaarka dadka Naafada Ah ee Lambarka Bulshada ee ka badan $738 laakiin ka yar $864 bishiiba.
Qof kasta ii la siiyo SSI $783 oo keli u nool waxaa sida caadiga ah la siinayaa $81 oo MSA ah.
Laba isu dhaxa oo wadanool oo la siiyo SSI ah $1175 waxaa sida caadiga ah la siinayaa $111 oo MSA ah.
haddii aad degan tahay goobaha dadka lagu hayo oo aan aheyn xarun caafimaad, lacagtu waa $102 bishiiba.
Iyada oo la eegayo sida loo xisaabo MSA, inta badan laguma siinayo haddii aad qof kale ladegan tahay marka laga reebo sayga/xaaska oo isna la siiyo SSI.
Haddii aad keli u nooshahay oo aad:
Leedahay heshiiska kirada oo kuu gaar ah.
Waxa aad leedahay ugu yaraan qol adiga kuu gaar ah
Cuntadaada u iibsato oo u karsato si gaar ah.
Haddii aad degan tahay goob noocaas oo kale ah oo laguu diiday MSA la xiriir Legal Aid.
Dakhli kasta oo ka sareeya lacagta lagaa siiyo SSI waa laguu xisaaabayaa gargaarka MSA, laakiin haddii aad shaqeyso, qeyb ka mid ah dakhliga ku soo gala laguuma xisaabayo.
Lacagta Baahida Gaarka Ah
Haddii aad ka soo baxado shuruudaha ku xiran MSA, waxaa suurogal ah mararka qaarkood in aad helikatolacag dheraad ah haddii:
Aad u baahan cunto gaar ah oo dhakhtar kuu qoray.
haddii aad leedahay wakiil, qof mas’uul kaa ah, qof hantidaada maamula oo aad lacag siiso.
Haddii aad leedahay dayactirka guryaha oo marka kaliya ah ama aad bedeleyso mid ah alaabada guriga.
Kirada aad bixisaa aad u sareyso.
Aad ka guureyso goob lagugu hayey ama isbitaalka dhimirka ama
Lagaa dhaafay adeegga Gargaarka Caafimaadka (Ceymiska) (MA)
Miyaan codsan karaa MSA?
Haa, haddii aad:
Tahay 65 jir ah ama ka weyn.
Tahay indhoole ama naafo ah da’daaduna u dhexeyso 18 iyo 65.
MSA waxa ay adeegsataa sharciyo la mid ah kuwa Lambarka Bulshada sida kuwa dadka naafada ah. Waxa aad kahelikartaa macluumaad arrintan ku saabsan bogga lambarka bulshada ee www.ssa.gov.
Waa in dakhligaagu ka yar yahay dakhliga kor lagu soo sheegay. Waxa aad ka codsan kartaa oo u soo gudbin kartaa degmada ama barta interka www.ApplyMN.dhs.mn.gov. Waxa kale oo aad soo wici kartaa kana codsan kartaa in boostada laguugu soo diro codsiga, laakiin telefoonka kuma codsan kartid. Shaqaalaha ayaa su’aalo kaa weydiinaya dakhligaaga iyo hantidaada haddii aad ka soo baxdo shruruudaha.
Waa maxay xadka hantida ee u go’an MSA?
Hantida waxaa loola jeedaa lacag ama hanti ma guurto ah. Haddii lagu siiyo SSI heerka u degsan MSA waa mid la mid ah tan SSIda. Taasi waxa ay ka dhigan tahay hantida qof kali ah waa ilaa $2,000. Lamaaanaha waa ilaa $3,000. laakiin waxaa jira waxyaabo aan ala xisaabin:
Alaabada guriga kuu taal iyo alaabada shaqsiga ah
1 gaari, qiimaha gaariga lama eegayo, marba haddii adiga ama qof qoyska ka tirsan isticmaalayo.
Hanti kasta ama qalabka shaqada oo dakhli kaa soo galo
Ceymiska nolosha iyo ceymiska aaska oo gaaraya ilaa $1,500
Xadka u go’an hantida waa mid aad u sareeya dadka la siiyo Hawlgabka Lambarka Bulshada ama Macaashka Naafada laakiin aan aheyn SSI.
Gargaarka Kabitaanka Minnesota ee Xaaladaha Degdegga ah (EMSA) ma jiroi Haddii ay jirto xaalad degdeg ah codso Gargaarka Guud ee Degdegga ah. Akhri xogta urursan ee Gargaarka Guud ee Degdegga ah.
Maxaan yeelayaa haddii la ii diido MSA?
Waxa aad xaq leedahay in aad racfaan ka qaadato. Waxaa jira oo aad racfaan u qaadan karto:
Waxa aad ku buuxin kartaa oo soo gudbin kartaa codsigaaga barta internetka. Soo booqo: https://mn.gov/dhs.
Waxaa kale oo aad heli kartaa tilmaamaha sida foomka loo buuxiyo haddii aad dooneyso in aad akhriso. Si taxadar leh u akhri, buuxi foomka oo dhan oo gurji “Submit (dir)” ee dhinaca hoose ee bogga. Waa fikrad wanaagsan in aad nuqul ka daabacato.
Waxa aad ku qori kartaa waraaq oo aad boostada ama faakis ku soo diri kartaa. U sheeg in aad racfaan ka qaadaneyso go'aanada MFIP oo la gaaray iyo sababta. Ha hilmaan in aad ku qorto warqadda lambarka dacwadda iyo taariikhda. Nuqul ka sameyso. Warqadaha ay degmadu kuu soo dirtay waxaa ku yaala cinwaanka iyo faakis lambarka aad ku soo direyso.
Akhri xogta urursan oo aad ka heli karto, Welfare Appeals (Racfaanka Gargaarka ee DHS.
Waxa aad heysataa muddo 30 maalmood ah in aad racfaan ku qaadato laga taariikhda ku qoran ogeysiiska laguugu diiday. Waxa aad racfaan ka qaadan kartaa 90 maalmood gudahood haddii ay jirto sabab macquul ah oo aad racfaanka u qaadan weysay 30 maalmood gudahood.
Waxaa dhageysanaya qaaliga adeegga dadweynaha, kaasoo go’aan qoraal ah ka soo saaraya racfaankaaga. Haddii ay jirto xaalad degded ah, weydiiso dadajinta racfaanka (dadajinta waxa ay ka dhigan degdeg loo qabto). Ka dib taariikhda dhageysiga degdeg ayaa loo qabanayaa.